प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरण: एक लाख जरिवाना किन नगर्ने? आचारसंहिता उल्लंघनकर्ताको सूचीमा किन नराख्ने?
12th May 2022, 08:52 pm | २९ बैशाख २०७९
काठमाडौँ: नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगले ८ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले मौन अवधिमा चितवनमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग मत मागेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले जानकारी दिए।
'गठबन्धनका उम्मेदवार र कार्यकर्तासहित करिब ३० जना व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गरेको र भरतपुर महानगरिालिकामा उम्मेदवार रहनुभएका व्यक्तिका पक्षमा मत मागेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ,' उनले भने।
होटल प्याराडाइजमा प्रचण्डले ३० जनासँग भेटेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। मौन अवधिको उल्लंघन भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले प्रचण्डलाई आचारसंहिता उल्लंघनकर्ताको रुपमा किन सार्वजनिक गर्न नपर्ने हो? भन्दै प्रश्न गरेको छ।
'निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ को उपदफा २ र उपदफा ३ अनुसार किन कारवाही गर्न नपर्ने हो?' प्रचण्डलाई सोधिएको प्रश्नलाई उदृत गर्दै उनले भने।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ को उपदफा ३ मा आयोगले एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। आयोगले प्रचण्डलाई सुक्ष्म अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएको पनि जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले चितवनले बिहीबार नै विज्ञप्ति जारी गरेरे प्रचण्डलाई कारवाहीको माग गरेको थियो।
'पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मी, श्रम तथा रोजगार मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, मन्त्रिपरिषद्का राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलगायतले मौन अवधिको समयमा निर्वाचन आचारसंहिताको कुनै पर्वाह नगरी सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग गर्दै भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकाका आम मतदाताको घर घरमा पुगी प्रभावमा पार्ने काम गरेको र मन्त्री किसान श्रेष्ठ र उमेश श्रेष्ठले भरतपुर महानगरपालिका भित्र आर्थिक चलखेल गरेको भन्ने सूचना आएकोले आवश्यक छानबिन गरी सो कार्य तुरुन्त रोक्न नेकपा एमाले चितवन जोडदार माग गर्दछ,'एमालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसअघि पनि आयोगले प्रचण्डलाई वैशाख २८ गते पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। चितवनमा आयोजित गठबन्धनको वैशाख २३ को चुनावी सभामा प्रचण्डले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत नदिए देश दुर्घटनमा जाने भन्दै भाषण गरेका थिए।